Sunday January 09, 2022 - 07:17:29 in Wararka by Mogadishu Times
"Arligaa la kala boobayaa kii u itaalroone” Faarax Nuur, 1930kii.
Maqaal uu Michael Rubin, oo ka tirsan American Enterprise Instituteku qorayNational Interestayaa dhaliyay su’aalo ku saabsan waxa Itoobiya ka damacsan tahay Soomaaliya guud ahaan. Rubin wuxuu ku dooday in Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u arko Seylac magaalo xeebeed u sahlaysa dib u dhiska ciidammada badda Itoobiya. Wuxuu Rubin u arkaa ujeeddadaas mid keeni karta in Itoobiya qabsato Seylac.
Doodda Rubin lama biciidsan karo. Maamulka Somaliland wuxuu cadaadis kala kulmay Itoobiya kaddib booqashadii Wafdi Masar ka socda uu dhowr sano ka hor ku yimid Hargeysa xilligii Itoobiya isu diyaarinaysay furista Biyoxireenka Dib-u-curashada (GERD). Dowladda Federaalka Soomaaliyeed way taageertay mowqifka Itoobiya oo ah inay xaq u leedahay dhisidda iyo maamulista biyoxireenka saameyn doona webiyada Suudaan iyo Masar. Sabab kale ayaa jirta: adduunku wuxuu marayaa marxalad habkii kala dambaynta (order) kaddib dagaalkii labaad uu aad u wiiqmay. Bishii hore majaladdaThe Economistwaxay ugu baaqday Maraykanka inuu sii ahaado ilaaliyaha habka kala dambaynta ay ku heshiiyeen dowladihii ka guuleystay Hitler. Majaladdu waxay ka digtay in dunidu dib ugu noqoto waagii kuwa awoodda lihi ay cagta marin jireen kuwa laga awood-badan yahay. Waa waagii uu Faarax Nuur, gabayaagii maskaxda badnaa, ka maansoonayay markuu tiriyay gabaygisiiArligaa la kala boobayaaoo dugsiyada lagu baran jiray ka hor 1991kii.
Howlgallada militari ee Itoobiya iyo Kenya waxay ifiniyaan waxa dowladaha Soomaaliya deriska la ah sameyn karaan haddii ay dareemaan halis istaraatijiyadeed kaga imanaysa dal ku tiirsan ciidammo nabad-ilaalin. Haddii gobollo ka mid ah Soomaaliya aysan aqoonsaneyn qarannimada Soomaaliya, waxay dadka gobolladaas ku nooli u nugul yihiin weerarro kaga iman kara dalalka deriska la ah Soomaaliya.Waa halista maamulka Somaliland uu hadda ku baraarugay.
Waxay ahayd riyadii Mililiq (Menelik) inuu dhul Soomaaliyeed ka taliyo waayo wuxuu Biritishka u sheegay in "Soomaalidu tahay lo’jir isaga u shaqaysa.”
Dhammaadkii dagaalkiilabaad kaddib markii Qaramada Midoobay diyaarinaysay in Soomaaliya madaxbannaani gaarto, Imbradoor Xayle Salaase, wuxuu isku dayay inuu saameyn ku yeesho wadahadallada. Waa xilli Itoobiya ay weli si dadban ugu hoos jirtay gacanta Biritayn oo ka xoreysay Fashiistadii Musolini. Dhowr sano ka hor dhammaadkii dagaalka labaad uun buu Biritishku Itoobiya dib u siiyay qarannimadeeda waayo ka hor xilligaas wuxuu Itoobiya u arkayay dhul cadaw laga qabsaday, sida uu Bahru Zewde ku qorayA History of Modern Ethiopia, 1855–1991.
Sanadkii 1946kii ayay dadka ku noolaa Hargeysa fureen xafiiska SYL (eeg buuggiisaA Modern History of the Somali, bogga 135 daabacaadda afraad ).Waxay arkayeen, maadaama aan maxmiyadda Biritishka ee Soomaalida loo oggoleyn inay u halgamaan madaxbannaani, inay bannaan tahay in SYL noqoto ururka u taagan raadinta madaxbannaanida Soomaalida ku kula hoos nooleyd maamulladii Talyaaniga iyo Biritishka. Go’aanka lagu furayay xafiiska xisbigii SYL waxaa ka hor yimid dad kale oo Hargeysa ku sugnaa. Fursaddaas la seegay ayaa qeyb ahaan keentay in Birtishku jebiyo heshiiskii uu beelaha Soomaalida la galay, kuna wareejiyo dhul Soomaaliyeed Itoobiya 1954kii.
Mabda’a Soomaali weyn ma ahayn mid Soomaalidu ku gardarraysanay dalal deris la ah. Waa mid ay Soomaalidu ku doonaysay inay wax ka qabato caddaalad-darradii keentay in dhul Soomaaliyeed oo dadkiisu madaxbannaani diyaar u ahaayeen la hoosgeeyo Itoobiya. Dhul Talyaani xukumayay laguma darin Itoobiya; dhul Biritishku xukumayay ayay dowladdii Biritishku ku dartay Itoobiya. Waa reer koonfureedka dadka maalka iyo dhiigga inta ugu badan ku bixiyay colaadihii ka dhashay ballanfurkii Biritishku ku sameeyay Soomaalida Waqooyiga. In maanta madaxda maamulka Somaliland ku soo toosaan halista dul heehaabeysa Seylac waxay caddaynaysaa in qarannimadu tahay waxa keliya oo ilaa hadda dunida lagu kala badbaado haddii Soomaalidu isku meel ka taagan tahay ilaalinta qarannimoku salaysan dhowrista xaqa qofka Soomaaliyeed. Haddii aynan ka dhiidhiyin gaboodfallada sida barakicinta iyo boobka qof Soomaaliyeed loogu geysto dalkiisa, way adkaan doontaa inaannu isu damqanno marka halisi soo foodsaarto qarannimada Soomaaliya.